Umhla My Pet » Ebusika Umhla Ideas
Iintsuku efudumeleyo ehlotyeni ukubonelela iimeko ogqibeleleyo romance umdla fun izimvo umhla yangaphandle, kodwa kutshintsha amaxesha onyaka kunye imimoya ebusika athabathe, izibini ezininzi banokufumanisa kunzima kakhulu ukuza izimvo umhla umdla xa kubanda yayo, iyana, kwaye, ngamaxesha athile, ngekhephu ngaphandle. Nazi ezintlanu izimvo umhla ebusika lokunceda ukugcina abo iimvakalelo eshushu phakathi kwakho sweetie nokutsha yakho naxa oko andiye ngaphandle.
Ebusika Umhla Uluvo #1: I-Ice skating
Songele nezikhafu neeglavu uthabathe iqabane lakho ukuba umkhenkce werinki yengingqi wonwabe ebusika-ixesha umthambo. Ngenxa imozulu ebandayo, wena omnye bakho obathandayo ukuba kunikwa ezinye imisebenzi umhla ngaphandle owawuza wena ndawonye ngexesha nyanga zishushu. Musa ukunikezela kwimisebenzi yangaphandle kuba nje zobusika. Ice skating kunokuba niyathandana (bebambene ngezandla, ukuchola xa ekuweni) kwakunye umthambo omkhulu yangaphandle.
Ebusika Umhla Uluvo #2: Christmas Light Gazing
Wasebenzise zonke ahombise indlu leeholide ngexesha lekhrismesi ngokucwangcisa umhla ukuqhuba ngeenxa ebumelwaneni bakho ngokujonga izibane iKrismesi. Uyakwazi ukugcina ifudumele imoto yakho, ukuphulaphula iKrismesi umculo okanye uthando onesingqi nokwabelana uvuyo izindlu thaa zizibane abengezelayo ezimibalabala kunye zokuhombisa zehlobo.
Ebusika Umhla Uluvo #3: Snuggling ngasemlilweni
Yintoni uthando ngaphezu ubuthe phantsi kwezinye iingubo efudumeleyo phambi komlilo wedobo? Ukuba unayo eziko endlwini yakho okanye igumbi, ukwenza umhla kunye neqabane lakho ukuchitha ixesha ubabonise phambi komlilo. Uyakwazi ukwenza itshokolethi eshushu kwaye ugcine ezishushu umlilo ekhaya okanye, Ukuba awunalo ukufikelela eziko ekhayeni lakho, ukuya evenk okanye afake eziko kwaye sabelana izimuncumuncu nekofu nakuba bezixhamla bagcakamele umlilo.
Ebusika Umhla Uluvo #4: Holiday Gift Shopping
isipho Holiday ezivenkileni kunokuba umsebenzi nzima, kodwa akazi ukuba. Unokuya iholide yakho isipho ezivenkileni ibe umsebenzi fun izibini. Isitshixo ukusigcina abantliziyo ukukhanya. Cwangcisa yimini ezivenkileni kwi mall okanye Udederhu lweeVenkile owuthandayo, ngesidlo sasemini ukwahlukana phakathi ukuze bahlale kukhululekwe kancinane. Yiya ngenjongo lokhangelo ngeenxa izipho, ukuchola izinto apha okanye phaya – musa ukuya ngo-ajenda ukufumana yonk 'into oyibonayo forÖthis enokukhokelela uxinezeleko okanye ixhala. Qinisekisa ukuba isicwangciso umhla wakho ezivenkileni kude kwangaphambili xa uya kunika izipho, ukuze uthathe ixesha lakho xa wena neqabane lakho ulaqaza.
Ebusika Umhla Uluvo #5: Basem- Snow
Wrap ngokwakho e ibhatyi enzima, leyisi phezulu iibhutsi zakho ikhephu, kwaye angazinikeli ngaphandle kwi ngekhephu imini. Wena omnye ubathandayo kuchitha imini
snowmen zokwakha, ukwenza iingelosi ikhephu, yaye besilwa Snowball playful. Nandipha ikhephu ngexesha u nga, oko akuthethi ukusoloko ngeenxa zonke ngonyaka, emveni kwakho konke. Yindlela kakhulu ukufumana umthambo emveni uyakwazi intloko endlwini ezinye ekoko eshushu.
khumbula, kuba nje imozulu iba ezibandayo, oko akuthethi imihla bakho nokuwanqika bubele. Unokuba akufiki nexesha ngokuthandana neqabane lakho naxa nto ngekhephu, isaqhwithi, okanye aqumbe. Wasebenzise nemozulu nobusika Sonwaba ikhephu ice skating, zigcine ufudumele phambi komlilo, inxaxheba kwimisebenzi yeholide ezifana ezivenkileni iKrismesi ukukhanya ijonga nobusika yakho qiniseka ukuba ngokupheleleyo nikhumbula nemyoli njengesithandwa yakho.